DEGMADA WARSHEIKH OO RAJEYNAYSO IN MARKALE HESHO GOLE DEEGAANEED MUDDO RUBAC QARNI AH KEDIB - Latest News Updates
DEGMADA WARSHEIKH OO RAJEYNAYSO IN MARKALE HESHO GOLE DEEGAANEED MUDDO RUBAC QARNI AH KEDIB
Warsheikh waa degmo ka mid ah Gobolka Sh/dhaxe, waxa ayna aheyd mar walba xaruun diineed ku taalo xeebta dhinaca waqooyi ee Magaaladda Mogadishu.
Waxa jiray in bartamihii bisha Maarso 1993 in oo heshiis dhex maray madaxda ururadii dalka ka talin jiray. Heshiiskaas oo ka dhacay Addis Abeba, Ethiopia. Si loo meel mariyo dib u heshiisiinta lagu gaaray magaaladda Addis Abeba waxaay u baahatay hay’adda UNOSOM 2 in ay raacdo labo dariiq oo lagu gaaro dib u heshiisiin taam noqota. In nabadeenta kor laga soo dhiso sida ay hogaamiye kooxeedkii ku heshiiyeen iyo in lagu kaabo hawshaas in nabadeenta laga soo dhiso halka hoose.
Taas waxa ay keentay in UNOSOM 2 soo dhisto gole deegaaneed heer degmo ah, lana soo gaarsiiyo heer gobol kedibna sidaas lagu soo xusho golaha shacabka ee heer qaran oo ka imaanayo gobol walba inta loo qoondeeyay. Hawshaas ay qaadatay UNOSOM 2 ma aheyn mid fudud, dhibaatooyinkii ay ka dhaxasheyna waxa ay keentay in ay dalka ka baxdo 1995.
Hawshaas dhibka badan oo aheyd in nabadeenta hoos laga soo dhiso waxa dusha surtay Dr. Kapungo oo ahaa madaxa xafiiska siyaasada ee hawl galkii UNOSOM 2, degmooyinka waxa ay helayeen tiro isla eg, waxa uuna Dr. Kapungo tegi jiray degmo walba maalintii loo balamay si uu xaqiijiyo tirade 21ka xubin gole deegaameed ee soo gudbiyeen hogaamiye kooxeedka sida USC – SSA ama USC- SNA hadba kii ka taliye gobolkaas. 21 xubin gole deegaaneed waxa soo xulayay Culumada, Odayaasha dhaqanka iyo ganacsatada balse waxa u gudbinayeen xafiiska siyaasadda madaxa hogamaaiye kooxeedka deegaankaas, kedibna waxa soo koontrooli jiray DR. Kapungo in la maray habkii loo baahnaa oo ah in cadaalad ay ku dhacday qeybsiga xubnaha deegaanka, lagana qeyb geliyay dadka laga tirade badan yahay ee ku nool deegaanka.
Degmada Warsheikh waxa ay 1993dii heshay markii u horeysay gole deegaaneed oo maamula arrimaheeda, waxa ayna aheyd farxad weyn. Waqtigaas ka hor gobolka shabeelada dhaxe waxa maamuli jiray dad ay dowladii militariga aheyd iyadda u soo magacaabatay gobolka iyo degmooyinkiisa. Dhismahii golaha deegaanka waxa uu ahaa mid leh farxad aan la soo koobi Karin maadaamo dadka iyagu soo doranayeen dadka xukumi lahaa. Balse reyn reyntaas ma raagin oo golaha deegaanka oo la soo dhisay 1993 waxa uu burburay markii dalka ka baxday 1995 UNOSOM 2 oo soo dhistay, maadaamo uusan laheyn shuruuc iyo qaab dhismeed kale oo lagu dhisay sii jirayna UNOSOM 2 kedib.
Haddaba, waxa soo ifbaxday in markale muddo laga joogo rubac qarni in la rabo in Warsheikh loo dhiso maamul dowlad hoose oo leh golahiisa deegaanka.
Waxaa jirta in hawshaan cusub bilaabatay 2017dii waxaana ku lug leh Dowladda Federaalka barnaamijkeedii loogu magac daray Wadajir National Framwork on Local Governance, UNDP/UNJPLG, EU, iyo wadamo kale oo dhammaan qeyb ka ah sida Soomaaliya loogu sameyn lahaa maamul deegaaneed oo leh maamul wanaag taas oo sahleysa in dowladnimada la gaarsiiyo ilaa heer degmo.
Waxaa rajeynayaa markaan in sahal ku dumi doonin mamulada degmooyinka leh dowladda hoose oo leh gole deegaaneed. Si taas u dhicin waxa jiray sannadihii na soo dhaafay laga bilaabo 2014kii barnaamijyo lagu taageerayay maamul goboleedyadda dalka in ay yeeshaan siyaasad la xariirta dejinta awooda ilaa heer degmo oo leh sharciyo iyo xeer lagu dhiso laguna maamulo dowladaha hoose. UNJPLG, EU, UK, Denmark, Sweden iyo Switzerland waxa ay ka saacidayeen maamul goboleedyadda dejinta, iyo daabacaada shuruucdaas iyo tababaro la xariira dhismaha golayaasha deegaanka.
Dowlad goboleedka Hirshabeellee oo ay qeyb ka tahay degmada Warsheikh waxa ay meel dhigteen xeer madaxweyne Lr. 004, soona baxay 21/10/ 2018 kedib markii oo u codeeyay Golaha shacabka ee dowlad goboleedka Hirshabeele, si loogu dhiso laguna maamulo dowladaha hoose ee dowlad goboleedka Hirshabeele.
CAQABADAHA DHISMAHA iyo KA SHAQEYSIINTA GOLAHA DEEGAANKA
Sharciga waxa uu leeyahay golaha deegaanka degmada Warsheikh oo ah 21 xubin waxa soo dooranaayo ERGO tiradeeda tahay 105 qof. Ergada waxaa soo magacaabayo Xildhibaanada Hirshabeele oo deegaan doorashadooda tahay degmada iyagga oo la tashanaayo odayaasha dhaqanka kedib markii lala tashto xubnaha bulshada deegaanka Warsheikh.
Marka hore bulshada degta deegaanka Warsheikh waa dad walaalo ah, oo sahal u heshiin kara haddii xagga sare laga fiiriyo waxgaradkooda iyo culumadooda iyo ganacsatadooda. Laakin markii uu yimaado qeybsi xubnaha 21 ka ah kuna dhisan qaab qabiil, halkaas waxaa imaanayo in qabaa’ilka keenaan isjiid jiid oo dhib u keenayo wada shaqeynta bulshadaas oo hadda si wadajirta u dhaqan.
Marka xigga sharciga waxa uu xusaa tuulooyinka jiray inta ayna dhicin dowladii dhaxe, tuulooyinka cusub ma jiro sharci xeerinaayo.
Ka shaqeysiinta Golaha deegaanka waxa ay ku xiran tahay sida loo dabaqo sharciga golaha deegaanka. Waloow ay imaaneyso dhibaato ka dhex dhalaneyso awoodaha hadda jira sida madaxda la doortay, golaha wasiiradda iyo golaha deegaanka ee dowlada hoose ee maamulka Warsheikh, maxaa yeelay sharciga waxa uu siinayaa hawlo aad u fara badan oo uu leeyahay golaha deegaanka, haddana hayaan madaxda la doortay iyo golaha fulinta.
Tankale, waxa ay ku xiran tahay xubnaha loo doorto golaha deegaanka, haddii ay yihiin kuwa yaqaano qeybna ka ah noolasha deegaanka degmada Warsheikh kana fuliyaan halkaas hawlahii loo idmaday. Ama in ay yihiin kuwa degan xamar rabanna in ay noqdaan gole deegaan oo ka jira degmada Warsheikh.
Golayaasha deegaanka oo hadda la dhisay ee gobolada sida SW iyo Puntland IWM sida la rabay ma u wada shaqeeyaan sababo xagga dhaqaalaha ahna in degmada iyada inay is-bixiso.
Waxaa wadnaa hadda wada tashi la xariira sida golaha deegaanka Warsheikh loo dhisi lahaa markale, aniga oo qeyb ka ahaa wafdigii ka qeyb galay shirkii Addis Abbeba oo lagu soo go’aansaday heshiiskii hogaamiye kooxeedyadda ku gareen halkaas 1993. Sida oo kale wxa ka qeyb qaatay dhismahii golaha deegaanka degmada Warsheikh 1993.
Qore: Xildh Maxamud Xuseen Mooge